Tuulo Jarmal ah ayaa muujineysa wadada loo maro isku filnaanshaha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Manuel Ramirez | | Kaydinta tamarta, Hoyga Cagaaran
Tan iyo 70-meeyadii Freiburg waxay kordhineysay sumcaddeeda iyo caannimadeeda mid kamid ah caasimadaha deegaanka ka yimid Jarmalka. Sannadkii 1986-kii magaaladu waxay lahayd himilo mid waarta oo dib ugu noqonaysa barnaamijyada ugu fiican ee gaadiidka iyo waxtarka tamarta kuwaas oo ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka.
Schlierberg waa xaafad ka mid ah xaafadaheeda waana ognahay maanta waxay soo saartaa in kabadan 4 jeer tamarta ay isticmaasho. Xaafad muujineysa habka loo maro isku filnaasho gebi ahaanba, maadaama haddii ay hadda soo saaraan tamar ka badan inta ay cunaan, hadafkoodu waa inay u madax bannaanaadaan cusub Batariyada Powerwall ka Tesla.
Sideed u dhihi laheyd mustaqbalku waa jiraa inaga hor, waa inaan u gudubno oo keliya xaggiisa. Schlierberg waxay ka kooban tahay 59 guri oo alwaax ah oo lagu dhisay qalab bey’adeedka ku fadhiya dhul dhan 11.000 oo mitir murabac ah.
Mid ka mid ah wanaagga xaafaddan iyo magaaladan ayaa leh dadka degan inta badan waxay ku socdaan lug ama baaskiilMarka laga soo tago xaqiiqda ah inay leeyihiin tamarta qorraxda, waxay dib u isticmaalaan biyaha roobka waxayna u adeegsadaan dhismayaasha qalabka bey'adda.
Xaafaddani waxay ku leedahay dhammaan guryaheeda xayndaabyo sawir-qaade ah oo loo dhigay jihada saxda ah ka helaan tamarta qoraxda 1.800 saacadood oo qorax leh oo ay haystaan ​​sanadkii. Freiburg, waa magaalada, waxay ka mid tahay gobollada ugu maalmaha badan sanadka.
Sida laga soo xigtay Rolf Disch, naqshadaha mas'uulka ka ah mashruuca, sii deynta qiyaastii 500 tan oo ah CO2 jawiga ayaa laga fogaanayaa. Guryaha waxaa loo dhisay si ay u yeeshaan saqaf fudud iyo bawado balaaran oo u oggolaada joogitaanka falaaraha qorraxda xilliga qaboobaha isla markaana ilaaliya guriga xilliga kulaylaha.
Mid ka mid ah tusaalooyinkaas in la raaco, iyo haddii aan taas ku xisaabtano halkan Isbaanishka waxaan ku leenahay magaalooyin leh Huelva oo leh wax ka badan 3.100 saacadood oo qorrax ah sanadkii, Ma ogi waxa aan sugeyno. Kaliya laba jeer tan gobolka sida tan lagu xusay qoraalkan, sida Freiburg ee Jarmalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Hoyga Cagaaran » Schlierberg, waa xaafad Jarmal ah halkaas oo 4 jeer laga soo saaro tamar ka badan inta la cuno
Ilaha tamarta loo adeegsaday taariikhda Mareykanka